बाल संरक्षण गृह सिफलमा “चोकोफनबाल–बाटिका”उद्घाटन - Pokhara Hotline News
बाल संरक्षण गृह सिफलमा “चोकोफनबाल–बाटिका”उद्घाटन
By Pokhara Hotline	 On २०७४ आश्विन २६ गते बिहीबार १५:०१
आश्विन २६, काठमाडौं
सुजल फूड्स प्रा.लि., नेपालको सबैभन्दा ठूलो र अग्रणी कनफेक्सनरी (चकलेट) उत्पादककम्पनिद्वारा बाल संरक्षण गृह, बालमन्दिरको शाखा, सिफल, काठमाडौंमा एक समारोहकाबीच“चोकोफनबाल–बाटिका” नामक खेलमैदानउद्घाटन गरिएको छ । विगत १७वर्षदेखि, यस कम्पनिको उत्कृष्ट उत्पादनचोकोफन नेपालभरिकाबाल–बालिकामाझ मुस्कान छर्न सफलहुँदै आएको छ । यसैगरी “चोकोफनबाल–बाटिका” द्वारा यस कम्पनिकोबाल संरक्षण गृह माआश्रित बाल–बालिकाहरुलाई खुशी र मुस्कान बाँड्ने एउटा अर्को जमर्को हो ।
“चोकोफनबाल–बाटिका”बाल संरक्षण गृहहाताभित्र सुन्दर ढङ्गले निर्माण गरिएको छ । यसक्रममा खेल सामाग्रीहरुःचिप्लेटी, ढिकी–च्याउ र पिङ् खेलमैदानमा जडान गरिएको छ । त्यस्तै मैदानसँगै जोडिएको पर्खालमाबाल–बालिकाहरु खेलमैदानमा रमाइरहेकाआकर्षक चित्र पेन्ट गरिएको छ । खेल–मैदानविभिन्न रङ्गहरुको प्रयोग गरी कलात्मक ढङ्गले बारिएको छ, जसले गर्दा खेलमैदानअझै सुन्दर देखिएको छ । खेलमैदानमाबाल–बालिकाहरुको सुरक्षाको मध्यनजर गर्दै र मैदानलाई प्राकृतिक स्वरुपदिनउच्च गुणस्तरको दुबो रोपिएको छ । खेल तथाअन्य निमार्ण सामाग्रीहरु छनौट गर्दा पनिबाल–बालिकाहरुको सुरक्षा मैत्रीहोस् भनेर विशेष ध्यानदिइएको छ । खेलकुदबाल–बालिकाहरुको शारिरिक तथामानसिकविकासको लागिअपरिहार्य छ । यस खेलमैदानबाटबाल संरक्षण गृहमाआश्रितबाल–बालिकाहरुले सिधै लाभलिनुका साथै उनीहरुको विकासमाफाइदाजनक हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।
चोकोफनबाल–बालिकाहरुमाझ सबैभन्दालोकप्रिय छ । यसर्थ, चोकोफनको संस्थागत सामाजिकउत्तरदायित्वबाल–बालिकाहरुको विकासप्रति केन्दि«त छ । हाम्रा सामाजिककार्यहरु सदैव हामीले सेवापुर्याउँदै आएका समाज, तथाबाल–बालिकाहरुको जीवनमा रमाइलो खुशी र प्रगतिप्रति उधेश्यनिर्देषित छ । हामीले निकट भविष्यमा यस्तो खेलमैदानको निर्माण बालमन्दिरकाअन्यशाखामापनिविस्तार गर्ने लक्ष्यलिएका छौं । हामीले गर्ने सामाजिककार्यहरु दीर्घकालीन र स्थायी हुनुपर्छ भन्ने विश्वास हामीले बोकेका छौं ।त्यसैले यस खेलमैदानको मर्मतसम्भार प्रतिपनिहामीप्रतिबद्घ छौ. । त्यसैगरी, हामीले हाम्रो संस्थागत सामाजिकउत्तरदायित्वबालबालिका सम्बन्धित क्षेत्रहरु जस्तै बाल–शिक्षा, बाल–स्वास्थ्य, बाल–पोषण र वातावरणमापनिविस्तार गर्ने लक्ष्यलिएका छौं ।
सुजल फूड्सको उत्कृष्ट उत्पादनचोकोफनले वर्षौ देखि नेपालीहरुको मन जित्दै आएको छ । यसलाई सन् १९९९ मापहिलो पटक बजारमाल्याइएको हो । लक्ष्मीग्रुपअन्तर्गतको भातृसंस्था सुजल फू्ड्स प्रा.लि.ले विगतचार दशकदेखि उच्च गुणस्तरको चकलेटहरुको उत्पादनगर्दै आएकोले यस कम्पनि देशकै नं. १ कन्फेक्स्नरी कम्पनिबन्न सफलभएको छ । यस कम्पनिले अन्तरष्ट्रिय स्तरको वेफर, टफी, बबलगम्तथा स्टिक गम्उत्पादनगर्दै आएको छ । यस कम्पनिको स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठित ब्राण्डहरुः चोकोफन, क्रेभ, रसिलो कयान्डी, फ्रेसो, क्यान्डीम्यान, आदिले लाखौंको मन जित्दै आएको छ ।